आहा ! रारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेल « Sahara Club, Pokhara
Sahara Club, Pokhara
Sahara Academy Third Batch
Sahara Academy Second Batch
Sahara Academy First Batch
हङकङमा घन्कियो सहारा साझ - Oct 6, 2014
About Sahara Club Hong Kong - Sep 23, 2014
सहारा कल्ब हंगकंग द्वारा धन्यवाद !!! - Sep 17, 2014
जानकारी - Sep 14, 2014
Soccer Training 2014 - Sep 14, 2014
सहारा क्लव : जसले सवैको मन जितेको छ - Jul 15, 2015
फुटबलका साना खेलाडी - Jan 10, 2014
Goals foralifetime: grassroots football in Nepal - Jan 2, 2014
Goals foralifetime: grassroots football in Nepal - Dec 21, 2013
हुर्काउँदै फुटबलर - Aug 11, 2013
आहा ! रारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेल
पोखरा ९, माघ
गत बर्षको उपविजेता आयोजक सहारा क्लव १६ औं संस्करणको आहा ! रारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलबाटै बाहिरिएको छ । पोखरा रंगशालाको फुटवल मैदानमा आज (मंगलबार) भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लव सुदुर पश्चिमाञ्चल स्थित धनगढीको एघार स्पोर्टिङ क्लवसंग ३–० को गोल अन्तरले पराजित भएसंगै पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको हो ।
स्पोटिङ क्लवको जितमा धन बहादुर थापा, मनिराम चौधरी र राकेश हमालले एक÷एक गोलको योगदान दिए । खेलको २५ औं मिनेटमा स्पोटिङ क्लवका धन बहादुर थापाले आफ्नो टिमको लागि पहिलो गोल गरे । उनले डि एरिया नजिकबाट प्रहार गरेको वल गोल भएको थियो । खेलको ७८ औं मिनेटमा नरेन्द्र चौधरीले हानेको फ्रि–किक वललाई पेनाल्टी एरिया नजिकै रहेका मनिराम चौधरीले हेड गोल गरे । मनिरामको हेड फिल्क हुदै गोल भएको थियो । खेलको २ मिनेटको ईन्जुरी समयमा राकेश हमालले एक गोल गरे। हमालले देब्रे साईडबाट करिब ३५ यार्डबाट प्रहार गरेको वलले जाली चुमेको हो । खेलमा स्पोटिङका मनिराम चौधरी म्यान अफ दी म्याच घोषित भए । उनलाई ट्रफीको साथमा नगद ५ हजार समेत पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
आयोजक सहाराले पाएका आधा दर्जन भन्दा बढी असवरहरु खेर जादा गत बर्ष फाईनलमा पुगेको सहारा यस बर्षको आहा राराको पहिलो खेलबाटै बाहिरिनु पर्यो । सहाराका विजय श्रेष्ठ, भिशन गुरुङ, विनोद गुरुङका गोल गर्ने केहि अवसरहरु खेर जादा सहाराले यस पटक पहिलो खेलबाटै यात्रा टुंगाउनु पर्यो । पहिलो हापमा १–० ले पछि परेको सहाराले दोश्रो हापमा खेलाडी परिवर्तन गरी खेलमा केहि परिवर्तन गर्न खोजे पछि अन्ततः खेलाडीहरुको फिनिसिङ गर्न नसक्दा दोश्रो हापमा अधिकाशं वल सहाराको पक्षमा भए पनि स्पोटिङ क्लवसंग पराजित हुनु पर्यो । खेलको ६३ औं मिनेटमा विजय श्रेष्ठले गोललाईन नजिकै पाएकोे वललाई सदुपयोग गर्न नसक्दा ट्रनिङ प्वाईन्ट गुमाएका हुन । सहाराका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले प्रयास गर्दा गर्दै आफुहरुसंग अनुभवी खेलाडीहरु अभावमा हार व्यहोर्नु परेको बताए । उनले भने “ हामीले गोललाईन नजिकै पाएको वल पनि सदुपयोग भएन, यसपटक हामीले विदेशी खेलाडी खेलाउन नपाउदा हारको अर्को कारण हो, हामीसंग यसपाली स्थानिय खेलाडीहरु नै बढी थिए । ” वर्क प्रमिट नभएका कारण ३ जना विदेशी खेलाडीहरु सहाराबाट यसपाली खेल्न बन्चित भएका हुन ।
स्पोटिङ क्लवका प्रशिक्षक सुरेस हमालले आफ्ना खेलाडीहरुले सहाराले फिनिसिङ गर्न नसकेको फाईदा उठाउदै जित हासिल गरेको बताए । उनले भने “ हामी र सहारा क्लवको गोल गर्ने अवसर दुबै तर्फ बराबरबी थियो त्यसमा सहाराले पाउका केहि अवसर खेर जादा हामीले पाउका अवसर गोल हुनु नै हाम्रो जित सहज भएको हो । ” भोलि बुधबार धरान फुटवल क्लव र भारतको सिक्किम युनाईटेड क्लव बिच खेल हुने भएको छ ।
यसैबिच, माघ २० गतेसम्म संचालन हुने उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन पोखरा लेखनाथ महानगरपालीकाका मेयर मान बहादुर जिसीले गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले पोखराको फुटवल विकासमा आहा रारा गोल्ड कपले धेरै सहयोग पु¥याएको जनाए । आहा रारा गोल्ड कपको मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्स प्रालिका निर्देशक प्रकाश केसीले पोखराको खेलकुदको लागि यस्ता खेल गतिविधिमा प्रालिले निरन्तर रुपमा सहयोग गर्दैै आएको बताए । सहारा क्लवका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाको अध्यक्षतामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा दुई विदेशी सहित १२ टिम सहभागि हुने क्लवका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिराम गुरुङ (सुरज) ले बताए । प्रतियोगितमा विजेताले उपाधि सहित ७ लाख एक हजार, उपविजेताले ३ लाख ५१ हजार प्राप्त गर्ने भएका छन।
“खेलकुदको विकासमा सहकार्य गर्रौ, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन शहरको रुपमा स्थापित गरौं” भन्ने उद्धेश्यका साथ सहारा क्लबले संचालन गर्दै आएको उक्त प्रतियोगिताबाट बचत भएको रकम सहारा एकेडेमीमा रहेका वालकहरुको भरणपोषर्णमा खर्च गर्दै आएको महासचिव विश्वराज बरालले बताए । सहारा एकेडेमीमा हाल १६ जिल्लाका २८ जना वालकहरु रहेकाछन। यस बर्षको आहा रारा गोल्ड कप हेर्न भाग्य शालि एक जना दर्शकलाई सहारा हङकङबाट स्कुटर प्रदान गरिने भएको छ ।
पोखरा रंगशालाको फुटवल मैदान अन्तराष्ट्रिय स्तरको निमार्णको लागि हाल ग्लोवल टेण्डर आव्हान भई, पुरानो प्यारापिट केहि भाग भत्काईएको छ । पुर्व पट्टिको प्यारापिटमा दर्शक रहेका थिए भने पश्चिमपट्टिे दर्शक जान रोक लगाईएको छ । क्लवले यस पाली दुई स्थानमा एक हजार क्षमताको कृतीम प्यारापिट (स्काई फोल्डिङ) निमार्ण गरेको छ। उक्त प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्स प्रालिको उत्पादन आहा तथा रारा तयारी चाउचाउ रहेको छ भने सहारा क्लव अष्ट्रेलिया दोश्रो पुरस्कार प्रायोजकको रुपमा रहेको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न पाँच विधामा उत्कृष्ट हुने पुरस्कार प्रायोजकमा पृथ्बीराजमार्ग बस संचालक समिति रहेको छ ।
Sahara Hongkong Events
Copyright © 2013, All Rights Reserved | Sahara Club Pokhara
Site by: pokharacity.com